के बुहारी छोरि हुन सक्दैनन ? - Rara Sanchar
संवाददाता : चित्रकला बुढा थापा प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १९:५७ प्रकाशित मिति : सेप्टेम्बर 10, 2020
आज सबैलाई प्रश्न गरेर सोध्न मन लाग्यो । आफ्नो प्राण प्यारो माईती घर छोडेर कहिले नचिनेको, नजानेको घरलाई आफनो घर बनाउन कति गाहे हुन्छ ? कसले बुझ्ने यो कुरा ? जसले भोग्छ उसैलाई थाहा हुन्छ । छोरी भएर जन्मिनु आफैमा ठूला कुरा हो । त्यसैमा हाम्रो समाजमा छोरीलाई प्रष्ट छुट्याइ दिन्छन । यस्तो गर्नु हुन्न ? उस्तो गर्नु हुन्न छोरिले त आफनो परिवारको इज्जत बचाएर राख्नुपर्छ । त्यसैमा कसैको घरको बुहारी हुन सजिलो छ र ? बुहारी भए बिहानै उठ्ने चुलोचौको गर्ने, घरका सबै जनालाई चिया नास्ता देखि मिठो मिठो खाने परिकार बनाएर खुवाउने । बिहाना उठे देखि साझ सम्म सबैको सेवा गर्छिन बुहारीले । तर उनीलाई तिम्लाई कस्तो छ भनेर सोध्ने कोहि हुदैन । झन उल्टो काम नै के छ र खाएको छ ? बसेको छ भन्न बेर लगाउदेैन्न । हरेक मानिसले चाहान्छ आफनो छोरी विहे गरेर गएको घरमा सधै भरि खुसि भएर बसोस तर आफनो घरमा आएको बुहारी पनि कसैको छोरी हो भन्ने बिर्सन्छन । यति सम्मको परिवार पनि छन, हाम्रो समाजमा बुहारीले सानो गल्ती गर्दा पनि माइतीले केही सिकाएको छैन भन्ने जवाफ दिन्छन । चाड पर्व आउँदा बुहारि माईती नगई दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर आफनो छोरी माईत आएको भए कति रमाईलो हुन्थ्यो भन्ने सोच हुन्छ । बुहारीको पनि माईती छ, उनलाई पनि चाड पर्व आउँदा आमाको हातको खाने, बाबाको काखमा सुत्ने, दाजु भाई, दिदी बहिनी साथीसंग कुराकानी गर्ने रहर लाग्छ होला भनेर सोच्दैनन ।
कतिपय त यस्तो परिवार पनि हुन्छन की बुहारी भए पछि घरको काम मात्र गर्नुपर्छ । घर बाहिरको काम गर्नु हुदैन भन्ने धारणा भएका हुन्छन । बुहारी भए पनि उसको मनमा कति इच्छा होलान ? कति आकांक्षा होलान ? आफनो खुट्टामा उभिएर केही गरी खाने सपना होलान भन्ने किन बुझ्दैन्न ? कतिपय घरमा जागिर गर्ने बुहारी हुन्छिन । तर उनको मनमा पनि पिडा कम हुन्न किन की दिन भरि काम गरेर आए पनि बुहारि भएकै कारण बिहान साँझको घरको कामले कहिले छौडदैन । घरमा अरु सदस्य भए पनि बुहारी छदैछ भन्ने हुन्छ ।
दिनभरीको कामले उनलाई थकान भएको होला भन्ने कसैले सोच्ने यहा ? छोरी भएको भए दिन भरी काम गरेर आउछिन । उनीलाई भोक लाग्छ भनेर मिठो खाने कुरा पाक्थ्यो होला ? तर उनै बुहारीलाई पाक्दैन हाम्रो समाजमा । समय परिवर्तनशील छ । समयसंगै हामी पनि परिवर्तन हुनु पर्छ । हाम्रो कतिपय कामले हाम्रो छोरी बुहारीलाई दुःख हुन सक्छ । त्यससमा सबैले ख्याल गर्न जरुरी छ । बुहारी पनि छोरि हुन भनेर उनको इच्छा, आकांक्षा उनको सपनालाई पुरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । छोरी नभई घर अध्याँरो हुन्छ भन्छन । तिनै छोरी हुन कसैको घरको बुहारी बन्ने । घरको सबैले एक अर्काको भावाना बुझेर घरलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ । जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्छ त्यो घर सदैव खुशीयाली छाउँछ ।
३० भाद्र २०७५, शनिबार ११:३८